Peer-ပြန်လည်သုံးသပ် Prause et al ၏ဝေဖန်မှု, 2015 - ။ Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်
Peer-ပြန်လည်သုံးသပ် Prause et al ၏ဝေဖန်မှု။ , 2015
EEG လေ့လာမှု - "porn စွဲနှင့်အတူကိုက်ညီမှုပြဿနာအသုံးပြုသူများနှင့်ထိန်းချုပ်မှုအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေအားဖြင့်နှောင်းပိုင်းကအပြုသဘောအလားအလာများ Modulation"(Prause et al။ , 2015)
တောင်းဆိုမှု: UCLA သုတေသီဟောင်း နီကိုးလ် Prause သူမ၏အထီးကျန် EEG လေ့လာမှုသည်“ ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုပုံစံကိုမှားယွင်းစေသည်” ဟုရဲရင့်စွာပြောဆိုသည်
အဖြစ်မှန်: အဆိုပါရလဒ်များပိုပြီးမကြာခဏ porn အသုံးပြုသူများသည်အတွက်လေ့ / desensitization ဖော်ပြသည်။ ဤစာတမ်းနှင့်ပတ်သက်သော သာ. ကြီးမြတ် porn အသုံးပြုမှုကိုအစီရင်ခံသောကြောင့် နည်းသော vanilla porn ဖို့ဦးနှောက်ကို Activation ပေါ်မှာစာရင်းဝင်ဖြစ်ပါတယ် ဤ နာတာရှည် porn အသုံးပြုမှုကိုနှိမ့်ချလိင်စိတ်နိုးထထိန်းညှိသောအယူအဆ supporting အဖြစ်က်ဘ်ဆိုက်။ ရိုးရှင်းစွာထားပါက, မကြာခဏ porn အသုံးပြုသူများကိုဟို-hum porn ၏ငြိမ်ပုံရိပ်တွေအားဖြင့်ပျင်းခဲ့ကြသည်။ (ဤတွေ့ရှိချက်များအပြိုင် Kuhn & Gallinat ။ , 2014။ ) ဤတွေ့ရှိချက်များနှင့်ကိုက်ညီများမှာ သည်းခံနေခြင်း၏နိမိတ်လက္ခဏာကို စှဲမွဲမှု။ သည်းခံစိတ်ကိုလူတစ် ဦး ၏မူးယစ်ဆေးဝါး (သို့) လှုံ့ဆော်မှုကိုတုံ့ပြန်မှုမှေးမှိန်လာခြင်းအဖြစ်ထပ်ခါတလဲလဲအသုံးပြုခြင်း၏ရလဒ်အဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ အောက်ဖော်ပြပါအောက်ဖော်ပြပါအုပ်စုတူအဆင့်တူပြန်လည်သုံးသပ်သောစာတမ်းကိုးခုသည်သဘောတူသည် ၏ YBOP အကဲဖြတ် Prause et al ။, 2015.
လေ့လာမှု ၂၇ ခုသည်တွေ့ရှိချက်များကို sensitization / cue-reactivity နှင့်ကိုက်ညီကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ မကြာခဏညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူများသည် EEG ဖတ်ခြင်းများသည်ထိန်းချုပ်မှုများထက်နိမ့်ကျသောကြောင့် ဦး ဆောင်ရေးသားသူနီကိုးလ်ပရာ့စ်ကသူ၏စက္ကူကို၎င်း၏မှားယွင်းသောကောက်ချက်ဖြင့်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုပုံစံကို“ မှားယွင်း” စေခဲ့သည်။ သူမသည်သူမ၏ EEG ဖတ်ချက်များသည် cue-reactivity ကိုအကဲဖြတ်သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည် လေ့။ Prause မှန်ကန်သောခဲ့ကြသည်ရင်တောင်သူမအဆင်ပြေသူမ၏ "မမှန်မကန်ပြုလုပ်မှု" အခိုင်အမာအတွက် gaping ပေါက်လျစ်လျူရှု။ မည်သို့ပင်အကြောင်းကိုသူမ၏တောင်းဆိုမှုများ၏ Prause et al ။ 2015 26, မကြာခဏ porn အသုံးပြုသူများသည်အတွက်လျော့နည်း cue-reactivity ကိုရှာတွေ့ အခြား အာရုံကြောလေ့လာမှုများ compulsive porn အသုံးပြုသူများသည်အတွက် cue-reactivity ကိုသို့မဟုတ်မတရားသော (ထိခိုက်လွယ်) သတင်းပေးပို့ကြပြီ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27။ သိပ္ပံလေးနက်အတိုင်းအတာများအားနည်းချက်တွေကိုအားဖြင့်မလွယ်ကူသည့်တည်းသောပုံမှန်မဟုတ်လေ့လာမှုနှင့်အတူမသွားဘူးနဲ့ ဘက်လိုက်ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်; သိပ္ပံသက်သေအထောက်အထား၏သဘောအရဆိုလျှင်နှင့်အတူတတ်၏။
မှတ်စု: ဒီ 2018 တင်ဆက်မှုအတွက်ဂယ်ရီ Wilson ကနှစ်ခုနီကိုးလ် Prause EEG လေ့လာမှုများ (အပါအဝင်5မေးခွန်းထုတ်စရာများနှင့်အထင်မြင်မှားစေသောလေ့လာမှုများ, နောက်ကွယ်မှအမှန်တရားဖျောထုတျသံမဏိ et al ။, 2013 နှင့် Prause et al။ , 2015): porn သုတေသန: အဖြစ်မှန်သို့မဟုတ်ထူးအိမ်သင်?
ဆယ်ပါးသက်တူရွယ်တူ - ပြန်လည်သုံးသပ်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း Prause et al ။ , 2015 ။ ကွားနှစ်ပေါင်းကျော် အများကြီးပိုပြီး neuroscience-based လေ့လာမှုများ (MRI, fMRI, EEG, neuropsychological, hormonal) ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ သူတို့တွေ့ရှိချက်များသည်ပစ္စည်းစွဲလမ်းမှုလေ့လာမှုများတွင်ဖော်ပြထားသောအာရုံကြောဆိုင်ရာတွေ့ရှိချက်များကိုထင်ဟပ်စေသောကြောင့်သူတို့အားလုံးသည်စွဲလမ်းမှုပုံစံကိုခိုင်မာသည့်အထောက်အပံ့များပေးသည်။ ညစ်ညမ်း / လိင်စွဲလမ်းမှုဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများ၏ထင်မြင်ချက်များကိုဤစာရင်းတွင်တွေ့နိုင်သည် 25 မကြာသေးမီကစာပေပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း & ဝေဖန်သုံးသပ်ချက် (အစွဲမော်ဒယ်နှင့်အတူအားလုံးတသမတ်တည်း) ။ အားလုံးအောက်ကစာတမ်းများအတွက်သဘောတူ Prause et al ။ လေ့၏တွေ့ရှိချက်ဖို့ထောက်ခံမှုချေး porn စွဲ မော်ဒယ်။ စက္ကူ #2 (Gola ဖြင့်ဖြစ်စေ) ဆန်းစစ်မှုမှတစ်ခုတည်းကိုသာကျိန် ဆို. ပူဇော်ဖြစ်ပါသည် Prause et al ။, 2015 ။ အခြား9စာတမ်းများကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာအကျဉ်းကဏ္ဍများဆံ့ Prause et al ။ , 2015 (အားလုံး EEG လေ့လာမှုဟာတကယ်ကိုလေ့ကျင့်ခန်း (သို့) စိတ်မသက်မသာဖြစ်ခြင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်။ စာတမ်းများကိုထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲဖြင့်စာရင်းပြုစုထားသည်။
1) အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစွဲ၏ neuroscience: တစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် Update ကို (2015)
အတူတူစာရေးဆရာသုံးခုနဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ထပ် EEG လေ့လာမှုမကြာသေးမီကထုတ်ဝေခဲ့ ။ ကံမကောင်းစွာပဲ, ဒီလေ့လာမှုအသစ် [ကြိုတင်တစ်ဦးအဖြစ်အတူတူအတိုင်းအတာများကိစ္စများအများအပြားထဲကနေခံစားခဲ့ရ303] ။ ဥပမာ, တစ်ဦးပင်သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောဘာသာရပ်ရေကူးကန်သုံးသုတေသီရောဂါဗေဒအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများအတွက်အတည်ပြုကြပြီမဟုတ်, နှင့်ဘာသာရပ်များစွဲသို့မဟုတ်စိတ်ဓါတ်များမမှန်၏အခြားသရုပ်များအတွက်ပြမခံခဲ့ရကြောင်းစိစစ်မေးခွန်းအလုပ်။
အဆိုပါလေ့လာမှုအသစ်မှာတော့ Prause et al ။ ထိန်းချုပ်မှုများကြောင့်နှင့်အတူအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်း၏မကြာခဏကြည့်ရှု၏နှိုင်းယှဉ် EEG လှုပ်ရှားမှုသူတို့နှစ်ဦးစလုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ကြားနေပုံရိပ်တွေကြည့်ရှုအားပေးအဖြစ် . မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းလွှဲခွင်တိုးလာ: IPA ဘာသာရပ်များအဘို့အသေးငယ်ခဲ့ပေမယ့်, ကြားနေဓာတ်ပုံများကိုဖို့ LPP လွှဲခွင်ဆွေမျိုး, နှစ်ဦးစလုံးအုပ်စုများအတွက်တိုးတက်လာခဲ့သည်။ အင်တာနက်ကညစ်ညမ်း၏မကြာခဏကြည့်ရှုသူများအတွက်တစ်ဦးထက် သာ. ကြီးမြတ်သောလွှဲခွင်မျှော်လင့်ခြင်း, စာရေးဆရာများ "ဒီပုံစံပစ္စည်းဥစ္စာစွဲမော်ဒယ်များမှသည်ကွဲပြားခြားနားပုံပေါ်" ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။
ဒါဟာ Prause et al ၏တွေ့ရှိချက်များကိုသတိပြုပါရန်အရေးကြီးပါတယ်။ သူတို့မျှော်လင့်ထားသည့်အရာ၏ဆန့်ကျင်ဘက်ဦးတည်ချက်ရှိကြ၏ ။ တဦးတည်းကအင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏ရောဂါဗေဒစားသုံးမှုမျှအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်မှုများမကြာခဏကြည့်ရှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေမှအကျဉ်းထိတွေ့တုံ့ပြန်အလားတူ LPP amplitude ရှိသည်ဖို့မျှော်လင့်ထားပေလိမ့်မည်။ အဲဒီအစား, Prause et al များ၏မျှော်လင့်မထားတဲ့တွေ့ရှိချက်။  အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအတွေ့အကြုံကိုလေ့၏မကြာခဏကြည့်ရှုနေဆဲပုံရိပ်တွေကိုမှအကြံပြုထားသည်။ တဦးတည်းယုတ္တိနည်းသည်းခံစိတ်ဤ Parallel ပေလိမ့်မည်။ မြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက်များ၏ယနေ့ကမ်ဘာပျေါတှငျ, ကအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူမကြာခဏစားသုံးသူနေဆဲမှဗီဒီယိုအပိုင်းများကိုဆန့်ကျင်အဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ရှင်နှင့်ဗီဒီယိုများကိုကြည့်ရှုရန်ဖြစ်နိုင်ခြေအလွန်နည်းပါးသည်။ လိင်ရုပ်ရှင် [လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေထက်ပိုပြီးဇီဝကမ္မနှင့်ပုဂ္ဂလဒိဋ္ arousal ထုတ်လုပ်ရန်310] နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေမှလျော့နည်းအကျိုးစီးပွားနှင့်လိင်တုန့်ပြန်အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ရှင်ရလဒ်များကိုကြည့်ရှု  ။ အဆိုပါ Prause et al ။ , အတူတကွခေါ်ဆောင်သွားနှင့်Kühnနှင့် Gallinat လေ့လာမှုများအင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏မကြာခဏကြည့်ရှုကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုသို့မဟုတ်အလယ်အလတ် porn အသုံးပြုသူများနှိုင်းယှဉ်ဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှုကျလာသောပိုမိုအမြင်အာရုံဆွလိုအပ်သောကျိုးကြောင်းဆီလျော်နိဂုံးချုပ်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြ။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, Prause et al ၏ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်။  ကအစောပိုင်းကထုတ်ဝေသုတေသန overlooks ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အကြောင်း, "ဒီ VSS စည်းမျဉ်းပြဿနာများကိုသတင်းပို့ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ပထမအလုပ်လုပ်တဲ့ဇီဝကမ္မဒေတာဖြစ်ကြောင်း" [ပြဿနာဖြစ်ပါသည်262,263] ။ ထို့အပွငျကအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းစွဲထဲမှာတွေကိုမှဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှုအကဲဖြတ်အတွက်အဓိကစိန်ခေါ်မှုများများထဲမှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုကြည့်ရှုသည့်စွဲလမ်းအပြုအမူကြောင်းကြောင်း။ မှတ်သားဖို့အရေးကြီးသည် ဆနျ့ကငျြ, ကိုကင်းစွဲအပေါ် cue-reactivity ကိုလေ့လာမှုများမဟုတ်ဘဲဘာသာရပ်များအမှန်တကယ်ကိုကင်းသုံးစွဲတာထက်ကိုကင်းသုံးစွဲခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ဓါတ်ပုံတွေကို (ကမှန်ပေါ်တွင်အဖြူလိုင်း), ကိုအသုံးချရန်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံများနှင့်ဗီဒီယိုများ၏ကြည့်ရှုသည့်စွဲလမ်းအပြုအမူဖြစ်ပါတယ်ကတည်းကအင်တာနက်ကညစ်ညမ်းသုံးစွဲသူများအနာဂတ်ဦးနှောက်ကို Activation လေ့လာမှုများရလဒ်များစမ်းသပ်ဒီဇိုင်းနှင့်အနက်နှစ်ဦးစလုံးအတွက်သတိထားယူရမည်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, နေဆဲပုံရိပ်တွေကို Prause et al အသုံးပြုသောမှတစက္ကန့်ထိတွေ့မှုမှမတူဘဲ။ , Voon et al ။ ပိုပြီးနီးနီးကပ်ကပ်အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းလှုံ့ဆော်မှုကိုက်ညီဖို့သူတို့ရဲ့ cue reactivity ကိုပါရာဒိုင်းအတွက်အကဲဆတ်သော 9-ဒုတိယဗီဒီယိုမှတ်တမ်းများကို ရွေးချယ်.  ။ နေဆဲပုံရိပ်တွေကို (Prause et al မှတစက္ကန့်ထိတွေ့မတူဘဲ။ နေဆဲပုံရိပ်တွေကိုတစက္ကန့်ထိတွေ့မှုလုပ်ခဲ့တယ်ထက်), 9-ဒုတိယဗီဒီယိုမှတ်တမ်းများထိတွေ့အင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏လေးလံသောကြည့်ရှုအတွက် သာ. ကြီးမြတ်ဦးနှောက်ကို Activation evoked ။ ဒါဟာနောက်ထပ် [စာရေးသူဟာ Voon လေ့လာမှုအဖြစ်တစ်ချိန်တည်းမှာဖြန့်ချိခြင်း, Kühnနှင့် Gallinat လေ့လာမှုရည်ညွှန်းကြောင်းကိုရည်မှတ်နေသည်262] သေးသောသူတို့က Voon et al အသိအမှတျပွုခဲ့ပါဘူး။ ယင်း၏အရေးပါဆက်စပ်မှုရှိနေသော်လည်းဘယ်နေရာမှာမဆိုသူတို့ရဲ့စက္ကူအတွက်လေ့လာမှု။
2) ပြproblemနာရှိသောညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ရှုသူများအတွက်လိင်ဆိုင်ရာပုံရိပ်များအတွက် LPP ကျဆင်းခြင်းသည်စွဲလမ်းမှုပုံစံများနှင့်ကိုက်ညီနိုင်သည်။ အရာအားလုံးသည်မော်ဒယ်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ Prause, Steele, Staley, Sabatinelli, & Hajcak အပေါ်ဝေဖန်သုံးသပ်ချက်, 2015 (2016)
Gola Matuesz1. 1တွက်ချက်အာရုံကြောသိပ္ပံ, ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောကွန်ပျူတာ Institute ကကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်, San Diego မှတက္ကသိုလ် San Diego မှ, အမေရိကန်နိုင်ငံများအတွက် Swartz ကိုရေးစင်တာ; စိတ်ပညာ၏ Institute မှ, သိပ္ပံ၏ပိုလန်အကယ်ဒမီ, ဝါဆော, ပိုလန်။ အီလက်ထရောနစ်လိပ်စာ: [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
Prause et al အားဖြင့်လေ့လာမှု။ (2015) ပြဿနာညစ်ညမ်းစားသုံးမှုအပေါ်စိတ်ဝင်စားဖို့ data တွေကိုကယ်တင်တတ်၏။3 အဆိုပါတင်ပြရလဒ်များကိုဆန့်ကျင်, ဒါမှမဟုတ်အကြောင်းအယူအဆ၏မကျြနှာ၌ရှိကြ၏လျှင်သေး, ကြောင့်စွဲမော်ဒယ်စမ်းသပ်ပြီးသောရှင်းရှင်းလင်းလင်းအယူအဆကြေညာချက်မရှိခြင်းနှင့်စိတ်မကောင်းစရာဝေဝါးစမ်းသပ်ပါရာဒိုင်း (ခဲယဉ်းခေါ်ဆောင်သွားပုံအခန်းကဏ္ဍသတ်မှတ်မှ) ၎င်းထိုသို့ပြောမဖြစ်နိုင်ပါ "ညစ်ညမ်းစွဲ။ " ကောင်းမွန်စွာသတ်မှတ်ယူဆချက်နှင့်အတူပိုမိုအဆင့်မြင့်သောလေ့လာမှုများအဘို့ဟုခေါ်ကြသည်။ Prause et al ၏ကံမကောင်းစွာဟာရဲရင့်ခေါင်းစဉ်ကို။ (2015) ဆောင်းပါးပြီးသား4အရှင်သိပ္ပံနည်းကျမတရားမှုဖွနိဂုံးချုပ်ကိုလူသိများ, အစုလိုက်အပြုံလိုက်မီဒီယာတခုတခုအပေါ်မှာသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ ညစ်ညမ်းစားသုံးမှု၏သက်ရောက်မှု၏ခေါင်းစဉ်၏လူမှုရေးနှင့်နိုင်ငံရေးအရေးပါမှုကြောင့်, သုတေသီများ သာ. ကြီးမြတ်သတိနဲ့အနာဂတ်ကောက်ချက်ဆွဲသင့်ပါတယ်။ (အလေးပေးထောက်ပံ့)
ရော်ဘင်ဆင်, MJ, Fischer, AM, Ahuja, အေ, Lesser, EN, & Maniates, အိပ်ချ် (2015) ။ လှုံ့ဆော်မှုရှိသောအပြုအမူကိုလှုံ့ဆော်ခြင်းနှင့်ကြိုက်နှစ်သက်ခြင်း၏အခန်းကဏ္ food များ - အစားအစာကိုလောင်းကစားခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်း။ အမူအကျင့်အာရုံကြောသိပ္ပံတွင်လက်ရှိခေါင်းစဉ်များ၊ https://link.springer.com/chapter/10.1007/7854_2014_300 2015 387
3) compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ Neurobiology: လွန်မြောက်သိပ္ပံ (2016)
comments: ဤစာတမ်းတစ်ခုသာအကျဉ်း summation ဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်, သူကအနည်းငယ် key ကိုလေ့လာတွေ့ရှိချက်များပါဝင်သည်။ ဥပမာ, နှစ်ဦးစလုံးကြောင့်ဒီလိုဖော်ပြထား Prause et al ။ , 2015 နှင့် Kuhn & Gallinat, 2014 porn ပိုမိုလေ့နှင့်အတူ correlating သာ. ကြီးမြတ် porn အသုံးပြုမှု: အလားတူတွေ့ရှိချက်သတင်းပို့ပါ။ နှစ်ဦးစလုံးလေ့လာမှုများသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည် အနိမ့် vanilla ညစ်ညမ်းဓါတ်ပုံများကိုမှအကျဉ်းထိတွေ့တုန့်ပြန်ဦးနှောက်ကို Activation ။ အောက်ပါကောက်နုတ်ချက်တွင် "အောက်ပိုင်းနှောင်းပိုင်းကအပြုသဘော-အလားအလာ" ၏ EEG တွေ့ရှိချက်ကိုရည်ညွှန်းသည် Prause et al.:
"မတူတာကတော့, ကျန်းမာတဲ့လူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်လေ့လာမှုများညစ်ညမ်းအလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းနှင့်အတူတိုးမြှင့်လေ့များအတွက်အခန်းကဏ္ဍအကြံပြု။ ကျန်းမာတဲ့လူတို့သညျတှငျ, တိုးမြှင့်အချိန်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများ (Kühnနှင့် Gallinat, 2014) အားအနိမ့်လက်ဝဲ putaminal လှုပ်ရှားမှုဆက်နွယ်နေကြောင်းညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်နေခဲ့ရသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုမှနိမ့်နှောင်းပိုင်းမှာအပြုသဘော-အလားအလာလှုပ်ရှားမှုပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်အတူဘာသာရပ်များအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်။ " (အလေးပေးထောက်ပံ့)
စက္ကူနှစ်ဦးစလုံးကြောင့်ဟု Prause et al ။ , 2015 နှင့် Kuhn & Gallinat, 2014 တွေ့ရှိရ လေ့ ပိုပြီးမကြာခဏ porn အသုံးပြုသူများကိုပါ။
Iဎဆနျ့ကငျြဘကျန်းမာတစ်ဦးချင်းစီအတွက်လေ့လာမှုများညစ်ညမ်းအလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းနှင့်အတူတိုးမြှင့်လေ့များအတွက်အခန်းကဏ္ဍအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ကျန်းမာတဲ့လူတို့သညျတှငျ, တိုးမြှင့်အချိန်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများ (Kühnနှင့် Gallinat, 2014) အားအနိမ့်လက်ဝဲ putaminal လှုပ်ရှားမှုဆက်နွယ်နေကြောင်းညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်နေခဲ့ရသည်။ အနိမ့်အနှောင်းပိုင်း positive- အလားအလာလှုပ်ရှားမှု ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုမှပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်အတူဘာသာရပ်များအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်, ခြားနားနေစဉ်တွင်, သဟဇာတမရှိကြပေ။ ဗီဒီယိုအားတွေကိုမှဆွေမျိုးတွေကိုမြင်ယောင်ရန်လေ့အလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းနှင့်အတူကျန်းမာတစ်ဦးချင်းစီအတွက်တိုးမြှင့်စေခြင်းငှါ, ပိုပြီးပြင်းထန် / ရောဂါဗေဒအသုံးပြုမှုနှင့်အတူ CSB ဘာသာရပ်များ cue reactivity ကိုပိုမိုကြပေမည်, သော်လည်း။
မကြာသေးမီ neuroimaging လေ့လာမှုများ CSB အချို့ဖြစ်နိုင်သော neurobiological ယန္တရားများအကြံပြုကြပေမယ့်အဲဒီရလဒ်တွေကိုအတိုင်းအတာများကန့်သတ် (ဒါပေါ်မှာဥပမာသေးငယ်တဲ့နမူနာအရွယ်အစား Cross-Section ဒီဇိုင်းများ, တစ်ခုတည်းကိုသာအထီးဘာသာရပ်များနှင့်) ပေးထားစမ်းသဘောအဖြစ်ကုသရပါမည်။ သုတေသနအတွက်လက်ရှိကွာဟချက် CSB အကောင်းဆုံးတစ်ခုစွဲအဖြစ်သို့မဟုတ်မစဉ်းစားသည်ရှိမရှိပြတ်သားပြဌာန်းခွင့်ရှုပ်ထွေးတည်ရှိ။ အပိုဆောင်းသုတေသန CSB များအတွက်ကုသမှုရလဒ်များတူသောသက်ဆိုင်ရာအစီအမံ clinically ဆက်စပ်ပုံကို neurobiological features တွေနားလည်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ တစ်ဦး '' အမူအကျင့်စွဲ '' အဖြစ် CSB ခွဲခြားမူဝါဒ, ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့်ကုသမှုအားထုတ်မှုများအတွက်သိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုအလို ရှိ. , သို့သော်ဤတစ်ကြိမ်, သုတေသနင်း၏နို့စို့အရွယ်၌တည်ရှိ၏။ CSB နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲလမ်းမှုကိုအကြားအချို့တူညီပေးထား, စှဲများအတွက်ထိရောက်သောဆောင်ရွက်ချက်အရှင်တိုက်ရိုက်ဒီဖြစ်နိုင်ခြေအားစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်အနာဂတ်သုတေသနလမ်းညွန်သို့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုများကို CSB ဘို့ဂတိတော်ကိုကိုင်လိမ့်မည်။ (အလေးပေးထောက်ပံ့)
4) တစ်ခုစွဲထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ compulsive သငျ့သလော (2016)
comments: ဤသုံးသပ်ချက်ကို, အခြားစာတမ်းများလိုပဲကပြောပါတယ် Prause et al ။, 2015 အတူ aligns Kühn & Gallinat၊ ၂၀၁၄ (ကိုးကား 72) အရာထက်ပိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကို vanilla porn ၏ရုပ်ပုံများကိုတုန့်ပြန်လျော့နည်းဦးနှောက်ကို Activation ဆက်နွယ်နေကြောင်းကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဖော်ပြကောက်နုတ်ချက် Prause et al ။, 2015 (ကိုးကား 73):
ဆနျ့ကငျြ, CSB မပါဘဲတစ်ဦးချင်းစီကိုအာရုံစိုက်သည်အခြားလေ့လာမှုများလေ့များအတွက်အခန်းကဏ္ဍအလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်ပါပြီ။ Non-CSB ယောက်ျားအတွက်, ညစ်ညမ်းကြည့်တဲ့ပိုရှည်သမိုင်းအလားအလာ desensitization အကြံပြုခြင်း, ညစ်ညမ်းဓါတ်ပုံအောက်ပိုင်းလက်ဝဲ putaminal တုံ့ပြန်မှုဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည်  ။ အလားတူပင် CSB မပါဘဲယောက်ျားမိန်းမတို့နှင့်အတူဖြစ်ရပ်တစ်ခု-related အလားအလာလေ့လာမှုအတွက်ညစ်ညမ်းသူတို့ကိုသတင်းပို့ပြဿနာအသုံးပြုမှုပြဿနာအသုံးပြုမှုကိုသတင်းပို့မဟုတ်သူတို့အားဆွေမျိုးညစ်ညမ်းဓါတ်ပုံတစ်ခုအောက်ပိုင်းနှောင်းပိုင်းကအပြုသဘောအလားအလာရှိခဲ့သည်။ နှောင်းပိုင်းအပြုသဘောအလားအလာစွဲလေ့လာမှုများအတွက်မူးယစ်ဆေးတွေကိုတုန့်ပြန်လေ့  သို့ခြီးမွှောကျနေသည်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်မှနှိုငျးယှဉျ, ဒါပေမယ့်နှင့်ကိုက်ညီမှုမရှိသည့်မဟုတ် CSB ဘာသာရပ်များအတွက် fMRI လေ့လာမှုများအတွက်ပိုကောင်းလှုပ်ရှားမှု၏အစီရင်ခံစာ, လေ့လာမှုလှုံ့ဆော်မှုအမျိုးအစား, အတိုင်းအတာ၏နည်းလမ်းနှင့်လေ့လာမှုအောက်တွင်လူဦးရေအတွက်ကွာခြား။ အသုံးပြုတဲ့ CSB လေ့လာမှုကွာခဏထပ်ခါတလဲလဲဓါတ်ပုံနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါဗီဒီယိုများပြသ; activation ၏ဒီဂရီအဆိုပါလှုံ့ဆော်မှုအပေါ်မူတည်ပြီးကွဲပြားစေခြင်းငှါဓါတ်ပုံများနှင့်လေ့သာရှိပြီးပြည်ပမှဗီဒီယိုများထူးခြားပြသလျက်ရှိသည်။ ထို့အပြင်ထိုဖြစ်ရပ်-related အလားအလာလေ့လာမှုမှာပြဿနာအသုံးပြုမှုကိုသတင်းပို့ရှိသူများအတွက်အသုံးပြုမှုနာရီအရေအတွက်ကအတော်လေးနိမ့်ခဲ့ [ပြဿနာ: 3.8, ထိန်းချုပ်မှုနှိုင်းယှဉ်စံသွေဖည်မှု (SD) = 1.3: 0.6, SD က = 1.5 နာရီအတွင်း / ရက်သတ္တပတ်] နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ အဆိုပါ CSB fMRI လေ့လာမှု (CSB: ထိန်းချုပ်မှုနှိုင်းယှဉ် 13.21, SD က = 9.85: 1.75, SD က = 3.36 နာရီ / တပတ်) ။ ထို့ကြောင့်လေ့အလားအလာပိုကောင်း cue-reactivity ကိုနဲ့ဆက်စပ်ပြင်းထန်အသုံးပြုမှုနှင့်အတူ, ယေဘုယျအသုံးပြုမှုကိုဆက်စပ်စေနိုင်သည်။ နောက်ထပ်ပိုကြီးတဲ့လေ့လာမှုတွေကဤခြားနားချက်ဆန်းစစ်ရန်လိုအပ်သည်။ (အလေးပေးထောက်ပံ့)
5) အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်စေသလဲ? လက်တွေ့အစီရင်ခံစာများ (2016) နဲ့တစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
Prause et al ခွဲခြားစိတ်ဖြာကောက်နုတ်ချက်။ , 2015 (ကိုးကား 130):
A Prause et al အားဖြင့် 2015 EEG လေ့လာမှု။ သူတို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေ (3.8 s ကိုထိတွေ့မှု) ကြည့်ရှုအားပေးအဖြစ်ထိန်းချုပ်မှု၎င်းတို့၏ကြည့် (0.6 ဇ / ရက်သတ္တပတ်ဆိုလို) အကြောင်းကိုဒုက္ခရောက်နေခဲ့ကြသောသူသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏နှိုင်းယှဉ်လျှင်မကြာခဏကြည့်ရှု (1.0 ဇ / ရက်သတ္တပတ်ဆိုလို) . Kühnနှင့် Gallinat မှုနဲ့အပြိုင်တဲ့တွေ့ရှိချက်များတွင်မကြာခဏအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းကြည့်ရှု [ထိန်းချုပ်မှုထက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေမှလျော့နည်းအာရုံကြော activation (LPP) ပြသ130] ။ နှစ်ဦးစလုံးလေ့လာမှုများ၏ရလဒ်များကိုအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်း၏မကြာခဏကြည့်ရှုကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုသို့မဟုတ်အလယ်အလတ်ကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည် [နဲ့နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှုကျလာသောပိုမိုအမြင်အာရုံဆွလိုအပ်ကြောင်းအကြံပြု167,168]။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, Kühnနှင့် Gallinat ပိုမိုမြင့်မားသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု striatum နှင့် prefrontal cortex အကြားအနိမ့် functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုဆက်နွယ်နေကြောင်းကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဒီ circuitry အတွက်ကမောက်ကမဖြစ်မှုမသက်ဆိုင်အလားအလာအနုတ်လက္ခဏာရလဒ်၏မသင့်လျော်အပြုအမူရွေးချယ်မှုနှင့်ပတ်သက်သောထားပြီး  ။ Kühnနှင့် Gallinat နှင့်အညီ, neuropsychological လေ့လာမှုများ [ညစ်ညမ်းပစ္စည်းနှင့်အတူရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာကျဘာစွဲဆီသို့ပိုမိုမြင့်မားသဘောထားကိုနှင့်အတူဘာသာရပ်များအလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှု function ကိုလျှော့ချခဲ့ကြကြောင်းသတင်းပို့53,114] ။ (အလေးပေးထောက်ပံ့)
6) "Emotion မသိနှင့် Non သတိဆောင်ရွက်ချက်များ: သူတို့ဟာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံသုံးစွဲမှုကြိမ်နှုန်းနှင့်အတူပြောင်းသလား?" (2017)
comments: porn အသုံးပြုသူများအပေါ်မှာဤ EEG လေ့လာမှု3နီကိုးလ် Prause EEG လေ့လာမှုများထောက်ပြသည်။ အဆိုပါစာရေးဆရာများအားလုံး3Prause EEG လေ့လာမှုများအမှန်တကယ် (မကြာခဏစွဲနှင့်အတူဖြစ်ပေါ်ရသော) မကြာခဏ porn အသုံးပြုသူများသည်အတွက် desensitization သို့မဟုတ်လေ့တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းယုံကြည်. ဤအ3ကားအညွှန်းအောက်ကကောက်နှုတ်ချက် #8 ဖြစ်ပါတယ် (အောက်ပါနီကိုးလ် Prause EEG လေ့လာမှုများညွှန်ပြ Prause et al ။ , 2015):
ဖော်ပြကောက်နှုတ်ချက် Prause et al။ , 2015 (ကိုးကား 8):
အဖြစ်အပျက်-related အလားအလာ (ERPs) မကြာခဏ [ဥပမာ, စိတ်ခံစားမှုတွေကိုမှတုံ့ပြန်မှုတစ်ခုဇီဝကမ္မအတိုင်းအတာအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ကြ24] ။ ERP data တွေကိုအသုံးချဖို့လေ့လာရေးထိုကဲ့သို့သော P300 အဖြစ်နောက်ပိုင်းမှာ ERP သက်ရောက်မှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်လေ့  နှင့် နှောင်းပိုင်းတွင်-အပြုသဘောဆောင်သောနိုင်သည့်အလားအလာ, (LPP) [7, 8] ညစ်ညမ်းရှုမြင်တဲ့သူတစ်ဦးချင်းစီအားစုံစမ်းစစ်ဆေးသည့်အခါ။ အဆိုပါ ERP waveform ဤနောက်ပိုင်းတွင်ရှုထောင့် [ဤကဲ့သို့သောအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အလုပ်လုပ်ကိုင်မှတ်ဉာဏ် (P300) အဖြစ်သိမြင်မှုဖြစ်စဉ်များမှစွပ်စွဲခဲ့ကြ25] အဖြစ်စိတ်ခံစားမှု-သက်ဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု (LPP) ၏အပြောင်းအလဲနဲ့ကြံ့ကြံ့ခိုင်ရပ်တည် . သံမဏိ et al ။  ကြားနေပုံရိပ်တွေမှဆွေမျိုးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပုံများကြည့်ရှုအကြားမြင်ပြီကြီးမား P300 ကွဲပြားခြားနားမှုအဆိုးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏အတိုင်းအတာနှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့ကွောငျးတငျပွခဲ့သနှင့်သင်တန်းသားများကို '' hypersexuality မသက်ရောက်ခဲ့ရသည်။ အဆိုပါစာရေးဆရာကဒီအနုတ်လက္ခဏာတွေ့ရှိချက်ကြောင့်ပါဝင်သူရေကူးကန်မှမဆိုဝတ္ထုအရေးပါမှုရှိခြင်းမဟုတ်ပြထားတဲ့ပုံရိပ်တွေဆုံးဖြစ်နိုင်ခဲ့ကြောင်းအကြံပြု, သင်တန်းသားများအဖြစ်အားလုံးအကျိုးဆက်ကတော့ P300 အစိတ်အပိုင်းများ၏ဖိနှိပ်မှုမှဦးဆောင်ညစ်ညမ်းပစ္စည်းမြင့်မား volumes ကိုကြည့်ရှုသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ကအညွှန်းကိန်းလှုံ့ဆျောမှုဖြစ်စဉ်များမှပြသခဲ့ပြီးအဖြစ်စာရေးဆရာများဖြစ်ကောင်းနောက်ပိုင်းဖြစ်ပေါ် LPP မှာရှာဖွေနေကြောင်းအကြံပြုအပေါ် သွား. , တစ်ဦးထက်ပိုအသုံးဝင်သော tool ကိုပေးလိမ့်မည်။ အဆိုပါ LPP အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုထားပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးလေ့လာရေးညစ်ညမ်းပစ္စည်းကသူတို့ကြည့်ထိန်းညှိပိုမိုမြင့်မားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်ပြဿနာများရှိခြင်းသတင်းပို့တဲ့သူသင်တန်းသားများကိုအတွက်ယေဘုယျအားဖြင့်သေးငယ်ဖြစ်ဖို့ LPP လွှဲခွင်ကိုပြသကြ [7, 8]. မြောက်မြားစွာသည်အခြားစွဲ-related လေ့လာမှုများတစ် cue-related စိတ်လှုပ်ရှားမှုတာဝန်နှင့်အတူတင်ပြသည့်အခါပြသကဲ့သို့ဤရလဒ်ကသူတို့သတ်သတ်မှတ်မှတ်စွဲ-inducing ပစ္စည်းဥစ္စာသူတို့ရဲ့စှဲလေ့ပိုကြီး LPP waveforms ပြတင်ဆက်သည့်အခါပုံရိပ်တွေညှိနှိုင်းပြဿနာများရှိခြင်းသတင်းပို့တဲ့သူတစ်ဦးချင်းစီ, မမျှော်လင့်ဘဲဖြစ်ပါတယ် . Prause et al ။ [7, 8] ညစ်ညမ်းပစ္စည်းသုံးရင်သတင်းပို့လေ့လာမှုရှိသူတို့တက်ရောက်လာသူများကိုညစ်ညမ်းပစ္စည်းကြည့်ရှုသုံးစွဲနာရီပမာဏကိုသိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားသွင်းယူအဖြစ်ညစ်ညမ်း၏အသုံးပြုမှုကြောင့်တစ်ဦးလေ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့်ဖြစ်စေခြင်းငှါအကြံပြုခြင်းအားဖြင့်သေးငယ် LPP ဆိုးကျိုးများဖြစ်ပေါ်စေမည်အဘယ်ကြောင့်ရန်အဖြစ်ကမ်းလှမ်းမှုအကြံပြုချက်များ ။
အနာဂတ်လေ့လာမှုများယဉ်ကျေးမှုကိုပြောင်းလဲဘို့အကောင့်တစ်ခုထက်ပိုသောကို up-to-date ဖြစ်အောင်စံချိန်စံညွှန်းမီ image ကိုဒေတာဘေ့စအသုံးချဖို့လိုအပ်လိမ့်မည်။ ဒါ့အပြင်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြင့်မားသောညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများလေ့လာမှုကာလအတွင်းသူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှု downregulated ။ ဤသည်ရှင်းပြချက်ကိုအနည်းဆုံး [အသုံးပြုသောခဲ့သည်7, 8] ငယ်များ LPP (နှောင်းပိုင်းကအပြုသဘောအလားအလာ) ကရည်ညွှန်းနေတဲ့ဆီးအတားမရှိချဉ်းကပ်လှုံ့ဆျောမှုပြသရာ၎င်းတို့၏ရလဒ်များကိုဖော်ပြရန်မထိန်းချုပ်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုသတင်းပို့တစ်ဦးချင်းစီအားဖြင့်ခေါ်ဆောင်သွားပုံရိပ်တွေမှ amplitude ။ LPP amplitude [ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ downregulation အပေါ်သို့လျော့ချဖို့ပြသပြီ62, 63] ။ ထို့ကြောင့်, ခေါ်ဆောင်သွားပုံရိပ်တွေမှ LPP အနေနဲ့ဘယျလိုမှမက "ခေါ်ဆောင်သွား" ကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့်အုပ်စုများကိုဖြတ်ပြီးပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာတွေ့ရှိခဲ့သိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုမရှိခြင်းများအတွက်အကောင့်လိမ့်မည်။ (အလေးပေးထောက်ပံ့)
7) အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါ (2018) တွင် Neurocognitive ယန္တရားများ
ကောက်နုတ်ချက်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း Prause et alကိုးကားသောအရာ။ , 2015 ( 87):
Prause နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များကကောက်ယူ EEG သုံးပြီးတစ်ဦးကလေ့လာမှု, ၎င်းတို့၏ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးဒုက္ခရောက်နေခံစားရသူကိုတစ်ဦးချင်းစီ, ညစ်ညမ်းသူတို့ရဲ့အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. ဒုက္ခဆင်းရဲမခံစားရဘူးသူတစ်ဦးကိုထိန်းချုပ်အုပ်စုနှိုင်းယှဉ်ပါကဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှုကျလာသောပိုမို / သာ. ကြီးမြတ်အမြင်အာရုံဆွလိုအပ်နိုင်ပါသည်ကြောင်းအကြံပြု ။ Hypersexual သင်တန်းသားများကို-တစ်ဦးချင်းစီ '' ကြုံနေရပြဿနာများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေ၎င်းတို့၏ကြည့်ထိန်းညှိ '(Mလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေထိတွေ့သည့်အခါ = တစ်ပတ်ကို 3.8 နာရီ) တူညီသောပုံရိပ်တွေထိတွေ့သောအခါနှိုင်းယှဉ်အုပ်စုတစ်စုကိုပြု၏ထက် EEG signal ကိုနှောင်းပိုင်းအပြုသဘောအလားအလာဖြင့်တိုင်းတာလျော့နည်းအာရုံကြော activation () -exhibited ။ (က cue သို့မဟုတ်ဆုလာဘ်အဖြစ်။ ပိုပြီး Gola et al တွေ့မြင်များအတွက် ) ဒီလေ့လာမှုမှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများ၏အနက်ပေါ် မူတည်. တွေ့ရှိချက်စှဲ  အတွက်လေ့သက်ရောက်မှုကိုညွှန်းသည်အခြားလေ့လာတွေ့ရှိချက်ကိုထောကျပံ့နိုငျသညျ။ 2015 ခုနှစ်တွင် BANCA နဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက် CSB နှင့်အတူယောက်ျားဝတ္ထုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုပိုမိုနှစ်သက်ခြင်းနှင့်အတူတူပင်ပုံရိပ်တွေ  မှအကြိမ်ကြိမ်ထိတွေ့သောအခါ dACC အတွက်လေ့ရဲ့သဘောထားအကြံပြုချက်များတွေ့ရှိချက်သရုပ်ပြကြောင်းလေ့လာသည်။ အဆိုပါဖျောပွလေ့လာမှုရလဒ်များမကြာခဏညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအားဖြင့်လိင်နှိုးဆွခံရဖို့ သာ. ကြီးမြတ်ဆွဘို့လိုအပ်ကြောင်းတိုးမြှင့်, ဖြစ်နိုင်သည်တိုးလာလေ့နှင့်သည်းခံစိတ်မှဦးဆောင်ဆုလာဘ် sensitivity ကိုလျော့နည်းကျဆင်းစေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။ သို့သော် longitudinal လေ့လာမှုများထပ်မံဒီဖြစ်နိုင်ခြေဆန်းစစ်ဖို့ညွှန်ပြနေကြသည်။ အတူတူယူယနေ့အထိ neuroimaging သုတေသနထိခိုက်စေလေ့အပါအဝင်ပြောင်းလဲဦးနှောက်ကွန်ရက်များနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ရိုသေလေးစားမှုနှင့်အတူမူးယစ်ဆေးဝါး, လောင်းကစားများနှင့်ဂိမ်းကစားခြင်းစှဲနှင့်အတူအယူအဆကြောင့် CSB ရှယ်ယာတူညီများအတွက်ကနဦးအကူအညီအထောက်အပံ့များပေးလျက်ရှိသည်။ (အလေးပေးထောက်ပံ့) ။
8) အွန်လိုင်း Porn စွဲ: အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့သိပါနှင့်အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ Don't-တစ်ဦးကစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်ချက် (2019)
Prause ရဲ့2EEG လေ့လာမှုများ critiquing ကောက်နုတ်ချက်: သံမဏိ et al။ , 2013 & Prause et al ။, 2015 (ကိုးကား 105 ဖြစ်ပါသည် စတီး, ကိုးကား 107 Prause ဖြစ်ပါသည်):
comments: Prause ရဲ့ 2015 EEG သူမ၏ 2013 EEG လေ့လာမှု (ထံမှတွေ့ရှိချက်ပုံတူကူးယူကြောင်းအထက်ပါဝေဖန်မှုပြည်နယ်များသံမဏိ et al။ ): နှစ်ဦးစလုံးလေ့လာမှုများစွဲမော်ဒယ် (သည်းခံစိတ်) နဲ့ကိုက်ညီသောလေ့သို့မဟုတ် desensitization ၏သက်သေအထောက်အထားများကဖော်ပြခဲ့သည်။ ငါ့ကိုရှင်းပြပါရစေ။
9) ဘာစွဲ၏ကနဦးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ: တစ်ဦးချင်းအားနည်း, စစ်ကူယန္တရားနှင့်ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောယန္တရား (2019)
comments: အထက်ပါဝေဖန်မှုကြောင့် Prause 8 EEG လေ့လာမှု (ခြားနားခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်သော #2013 ရန်အလွန်ဆင်တူသည်သံမဏိ et al။ ) Prause et al ။ , 2015 နှင့်အတူ။ အခြားဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားသည့်နည်းတူ Gola ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့်လည်းသဘောတူသည်။
10) အမျိုးမျိုးသောညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများနှင့်အကြမ်းဖက်မှုကိုထိတွေ့ခြင်းသည်အမျိုးသားများအတွက်သတိမထားမိသောစိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုဖြစ်စေသည် (၂၀၂၀)
comments: လျစ်လျူရှုသည် Prause et al ။ ရဲ့ မထောက်ခံသည့်ခေါင်းစဉ်၊ စာရေးသူများသည်ဖော်ပြချက်များအနက်အများဆုံးဖြစ်နိုင်သည်ကိုလက်ခံခဲ့သည် Prause et al ။, 2015: "Prause et al။ LPP waveform ကိုတင်ပြသောသင်တန်းသားများအနေဖြင့်ဤမျှော်လင့်မထားသည့်တွေ့ရှိချက်သည်လေ့ကျင့်ခန်းဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုများကြောင့်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းအကြံပြုခဲ့သည် alဒါကြောင့်သူတို့ဟာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်တဲ့အချိန်မှာသိသိသာသာများများရခဲ့တယ်။ ”